“Waxaan iska diiday inaan ku biiro Real Madrid laba jeer” – Carles Puyol – Gool FM
“Waxaan iska diiday inaan ku biiro Real Madrid laba jeer” – Carles Puyol
(Spain) 31 Luulyo 2019. Halyeeyga Barcelona ee Carles Puyol ayaa xaqiijiyay inuu isku diiday ku biirista kooxda Real Madrid laba jeer oo hore.
Carles Puyol ayaa ku sababeeyay diidmadiisa dalabyada uu ka helay Real Madrid, inuu u ciyaaray kooxda ugu fiican addunka, isla markaana uu doonayay inuu koobab kula guuleysto.
Puyol ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Markii ugu horeysay ay kooxda Real Madrid isku dayday inay ila saxiixato waxay aheyd xilli ciyaareedkii 2000’/2001 waana iska diiday, Saddex xilli ciyaareed kaddib Real Madrid markale ayeey ii soo bandhigtay dalab cusub, laakiin sidoo kale waan diiday, waxaan ahaa kabtanka Barcelona, Ronaldinho sidoo kale wuxuu ka tirsanaa kooxda”.
Yeelkadeeda, Puyol ayaa inta uu xirnaa maaliyada kooxda Barcelona wuxuu kula guuleysatay 21 koob, 3 jeer ee ah tartanka UEFA Champions League, 2 jeer koobka kooxaha adduunka ee FIFA Club World Cup, Super Cup oo 2 jeer ah, 6 jeer oo ah horyaalka La Liga ee dalka Spain, 6 koob oo Spanish Super Cup ah, Copa del Rey 2 koob, lagu daray koobka adduunka iyo Euro uu kula guuleystay xulkiisa qaranka Spain.
Intaas kaddib Carles Puyol ayaa wuxuu ka warbixiyay koobkii ugu muhiimsanaa uu ku guuleystay xirfadiisa kubadda cagta wuxuuna yiri:
“Koobkeygii ugu fiicnaa ee aan ku guuleystay wuxuu ahaa Champions League-gii Paris ee 2006, maxaayeelay waxaan ka tirsanaa Barcelona, wuxuuna ahaa koobkii iigu shucuurta badnaa aniga ahaan”.
Taageerayaasha Real Madrid oo u codeeyay xiddiga ay u arkaan inuu u qalmo ku guuleysiga abaalmarinta laacibka sanadka ee The Best 2019